China Copper Brewery mpanamboatra sy mpamatsy | OBeer
+86 139 4819 9540 (Rosiana)
Momba an'i Obeer
Fitaovana fanaovana labiera
Fitaovana fanamboarana labiera ara-barotra
Fitaovana labiera Nano
Pub & Bar & Restaurant Bir ny rafitra famokarana labiera
Rafitra fanamboarana birao roa
Rafitra fanamoriana visy telo
Rafitra birao efatra
Rafitra fanafanana etona
Famokarana hetra mivantana
Rafitra fikosoham-bary vy
Tavoahangy fermentation roa loha
Single fermenter rindrina
Rafitra labiera mamirapiratra
Tavo-biriky mamiratra marindrano
Taratasy misy labiera mamiratra tokana
Tavo labiera mamiratra mitsangana
Biraon'ny mpanamory labiera
Rafitra fanaraha-maso labiera
Masinina tavoahangy sy boaty & Masinina famenoana Keg
Masinina mameno tavoahangy labiera
Masinina famenoana labiera
Masinina Beer Keg
Fitaovana sy milina mpanampy
Kitapo fitehirizana voankazo
Brewery vita amin'ny varahina
Ny tady fametahana / kettle dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Mash tun dia sambo iray ampiasaina amin'ny fizotran'ny fametahana hanovana ireo fary ao anaty voamadinika voatoto ho siramamy ho an'ny fermentation.
Anaran'ny vokatra: 500L Copper Brewery
Matetika izahay dia mampiasa tanky varahina ivelany, ny ao anatiny dia SS304 na SS316 fitaovana hanamboarana tanky fanaovana labiera.
500L Masy Tun
500L Kitapo laoter
Ny tuner lauter dia ampiasaina amin'ny sivana sy ny fanazavana ny ranon-tsigara (antsoina hoe wort) avy amin'ny fangaro amin'ny rano malt nafanaina (antsoina hoe mash) izay avy amin'ny tonta fanoto. Izy io dia manana endrika miaraka amina ambany tsy izy amin'ny v-wire vy tsy misy fangarony ary fitaovana tsy mandeha amin'ny laoniny izay manana fiasan'ny mpampirisika, ny rake ary ny mpanala vola azo. Fitaovana miavaka sy manampy tokoa ity satria aorian'ny fanivanana ireo voa dia lany dia hesorina amin'ny lauter tun, mamonjy fotoana sy hery be avy amin'ny mpanamboatra labiera.
500L Ketila mangotraka / Tononkira
Aorian'ny fanasan-damba dia ampangotrahina hops (sy tsiro hafa raha ampiasaina) ny wort labiera ao anaty tanky antsoina hoe tunnel / whirlpool. Ny fizotran'ny mangotraka dia toerana misy ny fanehoan-kevitra simika sy ara-teknika, ao anatin'izany ny fanafoanana ny wort hanalana bakteria tsy ilaina, ny famoahana ny tsiro hop, ny fangidinana ary ny fofona misy fofona amin'ny alàlan'ny isomerisation, ny fampitsaharana ny fizotran'ny enzimma, ny rotsakorana ny proteinina ary ny fatran'ny wort.
2.500L rafitra fametahana varahina
*Ivelany ivelany: Copper, TH: 2mm;
Ao anaty: SUS304, TH: 3mm. Passivation amin'ny fonosana anaty.
* 20% ~ 30% lohan'ny loha
* Fanamafisana: Volon'ondry vato
* Ny hatevin'ny sosona misisika: 80mm
* Hatevin'ny atiny: 3mm, hatevin'ny ivelany: 2mm
* Fanafanana: Afo, etona na afo mivantana.
* Rafitra fikorontanana mekanika sy raker: fanaraha-maso matetika
* Manway nitaingina ambony, fitaratra tsy voatery
* Fanadiovana: 360°baolina fanadiovana rotary rotary
* Etsy ambany: V-Wire gorodona diso tafiditra ao amin'i Lauter Tun - manome toky fa tsy mandeha ny onja wort
* Haavo-rano miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana
* Fantsom-pivoahana ao anaty kettle
* Jiro mandeha LED
* Thermowell ho an'ny mari-pana, PT100 Temperature Probe.
* Voasana an-tampon'ny haavo ambany, tendron'ny taper ambany 140 °.
* Fiaraha-miasa fiarovana.
* Fiarovana amin'ny takelaka, voasarona amin'ny kofehy ny kofehy.
* Kitendry efijery sy programa PLC
* Fanaraha-maso semi-automatique na mandeha ho azy miaraka amin'ny valizy buttlefly elektronika na pneumatic
* Sehatra fanodinana vy tsy misy fangarony & tohatra na tohatra tafiditra amin'ny fehin-tongotra azo ahitsy ho an'ny haavo haavo
* Miaraka amin'ny valves sy kojakoja mifanentana rehetra.
* Tambo-drano mafana sy tanky rano mangatsiaka ho an'ny safidy tsy mitambatra
* Fanomezana Wort
Aza misalasala mifandray raha mila fanazavana fanampiny !!
Previous: Rafitra fanamasinana
Manaraka: Brewhouse & Mash unit
Toeram-pisotro misy sambo 5000L efatra: mash, tanky lauter, ...
Rafitra famoahana etona 500L
Masinina famenoana kapoaka
Rafitra labiera 500l ho an'ny labiera Pub & Bar & ...
Toeram-pisotro misy sambo 8000L efatra: mash, tanky lauter, ...
Rafi-pamokarana herinaratra herinaratra 500L
No. 12111 Jingshi Road, Distrikan'i Lixia, Jinan City, Shandong, Sina.
Tel:+86 139 4819 9540 (Rosiana)
Tel:+86 183 9686 9045 (Anglisy)